Hlaziya imenyu epheleleyo yesikrini kwiwebhusayithi yakho ngeendlela ezili-10 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimenyu ezili-10 ezipheleleyo zesikrini seCSS kuyo nayiphi na iwebhusayithi
Los Imenyu epheleleyo yeCSS Bangena ngokufanelekileyo ekusebenziseni imifanekiso emikhulu edla ukugxininisa umxholo wewebhu, nokuba liphepha lokufika, indawo yokufota okanye i-eCommerce apho sifuna ukuqaqambisa imveliso ethile.
Olu luhlu lweesikrini esigcweleyo se-10 okanye iimenyu zeCSS ezigcweleyo landela imigangatho yangoku kwaye zisikhokelela ekubeni sizise loo nto yongezelelweyo yomgangatho kuyilo lwewebhu ekufuneka silujongile namhlanje. Sele silandele olunye uthotho lwamanqaku afanayo, anje amamenyu asempuma o le enye. Masihambe kunye neemenyu ezili-10 ezipheleleyo zesikrini seCSS.
1 Imenyu epheleleyo yesikrini
2 Ukuhamba kwescreen esipheleleyo
3 Imenyu epheleleyo yesikrini
4 Imenyu yesikrini seFlexbox
5 Ukuhamba kwescreen esipheleleyo
6 I-CSS epheleleyo yemenyu yesikrini
7 Imenyu epheleleyo yesikrini
8 I-CSS3 yemenyu epheleleyo yescreen
9 Ukuhamba kwescreen esipheleleyo
10 Imenyu yokuhamba yokukhangela eyi-CSS
Imenyu epheleleyo yesikrini
Le khowudi kancinci Flexbox kunye jQuery usizisa kwimenyu ebalaseleyo yesikrini esigcweleyo ngokuchanekileyo. Oopopayi basibeka phambi kwamacandelo ahlukeneyo. Ukugqibelela ukuvuselela iwebhusayithi yethu namhlanje.
Ukuhamba kwescreen esipheleleyo
Enye imenyu yesikrini esigcweleyo ngoku egudileyo kunye yenziwe oopopayi betshintsho okusisa kumacandelo ahlukeneyo avela ngobukhulu obuhle. Iyamangalisa kwaye isitayile.
Imenyu encinci yesikrini esigcweleyo elandela umgangatho wezangaphambili, nangona kunjalo ngombono kulula. Oku akuthethi ukuba ngomnye umgangatho osemgangathweni wokuhlaziya iwebhusayithi yethu kwaye uyenze ibonakale kubakhenkethi.
Imenyu yesikrini seFlexbox
Le menyu ukunganikezeli ngokufanelekileyo kwi-IE. Ngayiphi na imeko, yenye yezinto ezikumgangatho ophezulu wokubonwayo kwezo ntlobo zabathengi abafuna into eyahlukileyo, kodwa enembonakalo yobungcali. Yenziwe ngokugqwesileyo ukuba ibe yenye yezona zikhetheke kakhulu kuluhlu.
Sifuna ukubeka nzima kuwe ngoluhlu lweemenyu. Le yenye intle kakhulu kwaye ithwala oopopayi abagudileyo. Ubuqili kakhulu kwiwebhusayithi yakho. Awungekhe uyiphose, ke sele sele unokhetho lokuhlaziya iwebhusayithi yakho ngekhowudi efana nale inikezelwe kwi-codepen. Sincoma ukuba ubone umzekelo ukuze ukwazi ukusebenzisana nayo kwaye ke ufumane ingcamango esondeleyo yendlela eya kubonakala ngayo.
I-CSS epheleleyo yemenyu yesikrini
Le menyu yesikrini esipheleleyo yile zezona zilula Uluhlu lonke. I icon yehamburger ebekwe ngasekunene kunye nemenyu ebonakala xa siyicofa, kanye embindini wesikrini. Kufanelekile ukubizwa ngokuba yimenyu epheleleyo yesikrini eyenziwe kwi-CSS.
Le menyu yesikrini esigcweleyo yiCSS emsulwa kwaye mnyama mnyama imvelaphi ukuze emva kokucinezela iqhosha le-hamburger sivele ngaphambi kokukhetha okukhethiweyo kwimenyu ngopopayi olwenziwe kakuhle lwengxangxasi. Enhle ngaphandle kwamathandabuzo.
I-CSS3 yemenyu epheleleyo yescreen
Imenyu yesikrini esigcweleyo ene uthotho lotshintsho kunye neziphumo ezenziwe kwiCSS3 emsulwa. Kulula ukukhulelwa, nangona kungenakuphoswa kolu luhlu ukuba yahluke kakhulu kwabanye.
Imenyu yokuhamba yokukhangela eyi-CSS
Siphelisa uluhlu ngemenyu yokuhambisa iscreen esigcweleyo esenziwa kwi-CSS emsulwa. Ngeli xesha sinalo iqhosha lehamburger ngasekhohlo Kwisikrini esenza ukuba oopopayi benze isangqa esivulayo ukubonisa amacandelo ahlukeneyo emenu. Mhlawumbi inguquko iyacotha, kodwa iyaqwalaselwa ukuyibeka ukuthanda kwethu.
Sikushiya ne uthotho lweefom kwiCSS lo nto Ungeniso lombhalo oluya kukhululeka ngakumbi kwaye uyonwabisa kumtyeleli wewebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Iimenyu ezili-10 ezipheleleyo zesikrini seCSS kuyo nayiphi na iwebhusayithi
I-Adobe ifumana iMagento ye- $ 1.680 yezigidigidi
Ubusuku bemyuziyam eMadrid, isekethe ongabuphosi